Lebelage Extreme Sun Cream - EasyAds Myanmar
စျေးနှုန်း : 6,000 Kyat (Fixed)
💁 LEBELAGE High Protection Extreme Suncream
🇰🇷Imported From Korea🇰🇷
နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ Skin Care Step တွေထဲမှာ Sunscreen Step ကလည်း မဖြစ်မနေသုံးပေးရမယ့် step တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်. နေရောင်ခြည်ဒဏ်နဲ့ UV Ray တွေကို ကာကွယ်ပေးတဲ့အပြင် တင်းတိတ် အမဲစက်တွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပြီး မျက်နှာအသားအရည် မပျက်စီးရအောင် suncream လေးကို ရာသီဥတု3ပါးလုံးမှာ မဖြစ်မနေလိမ်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်နော်😍
နေရောင်ခြည် ထဲမှာ ပါတဲ့ UVB, UVA တွေကြောင့် အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်မှုနဲ့ အမဲစက် တင်းတိတ်များ ဖြစ်စေပါတယ်။
Lebelage Sun Cream လေးက Natural Mineral UV filter ဖြစ်တဲ့ FDA Approved Titanium Dioxide ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။
🔹Titanium Dioxide က နေရောင်ခြည်ရဲ့ UV Ray များ အသားရေထဲ စိမ့်ဝင်မှုကို တားဆီးပေးတော့ အမဲစက်နဲ့ အသားရေ ပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
UVA ဆိုတာ : အပြင်းဆုံးရောင်ခြည်ဖြစ်ပြီး အသားရေရဲ့ အနက်ရှိုင်းဆုံး အလွှာထိ ဝင်ရောက်ပြီး အိုမင်းခြင်းနဲ့ အရေးကြောင်းတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။
UVB ဆိုတာ : အသားရေ အပေါ်ယံလွှာကို ပျက်စီးစေပြီး နေလောင်ဒဏ်နဲ့ အရေပြားကင်ဆာထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
🔹Lebelage ရဲ့ “Suncream” လေးက SPF50 PA ပါဝင်လို့ UVA , UVB ကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။
PA ဆိုတာလေးက UVA UVB ကို အမြင့်ဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ထုတ်ကုန်တွေမှာရေးတဲ့ သငေ်္ကတလေးပါ။
💘 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗲𝗺𝗲 𝗦𝘂𝗻 𝗖𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗦𝗣𝗙𝟱𝟬 𝗣𝗔
🔹Full Cover ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့ Sun Cream လေးပါ။
🔹နေပူထဲတနေကုန်ထွက်နေရသူတွေ အတွက် အရမ်း သင့်တော်ပါတယ်။
🔹အသားအရေခြောက်သူများ သုံးလို့ ရပါတယ်။
🔹တစ်ဘူးမှာ 30ml ပါဝင်လို့ အကြာကြီး သုံးလို့ရပါတယ်။
🔹ဈေးတန်ပြီး အရမ်း အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်နော်။
✔ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ ရာသီဥတု3ပါးလုံးမှာ Sun Cream သုံးသင့်ပါတယ်။
➡Suncream မသုံးရင် အမဲစက် နဲ့ အရေးကြောင်းများ မြန်မြန် ရောက်လာမှာနော်။
Price – 6,000 kyats
Suncream လေး လိမ်းပြီး အသားအရေ ထ်ိန်သိမ်းကြဖို့ မင်မင်တို့ရဲ့ Messenger ကို အမြန် လှမ်းလာခဲ့တော့နော်။
#LEBELAGE_Extreme_SunCream 💁 LEBELAGE High Protection Extreme Suncream💯% Authentic 🇰🇷Imported From Korea🇰🇷 နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ Skin Care Step တွေထဲမှာ Sunscreen Step ကလည်း မဖြစ်မနေသုံးပေးရမယ့် step တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်. နေရောင်ခြည်ဒဏ်နဲ့ UV Ray တွေကို ကာက...